Maanulihii dugsiyada Nuuradiin oo masaajid lagu dhex weeraray | Berberanews.com
Home WARARKA Maanulihii dugsiyada Nuuradiin oo masaajid lagu dhex weeraray
Hargeysa (Berberanews) Maamulaha Dugsiyada Nuuradiin ahna aasaasahi iskuuladaasi, ayaa xaaladdiisa caafimaad soo wanaagsanaaneysa, mudane Mahad Ibraahim Nuuradiin, ka dib markii uu Salaaddii Makhrib ee shalay fiidkii nin weeraray uu soo gaadhsiiyay dhaawacyo.
Ninkan weeraray oo ka mid ahaa macalimiinta wax ka dhigta mid ka mida dugsiyadda hoose dhexe ee Nuuradiin ayay kuwada tukadeen, Masaajidka Shaafici ee Xaafadda 150-ka ee magaalada Hargeysa.
Maamul Ismaaciil oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi; “Walaal xaaladda Caafimaad ee maamulka guud ee Dugsiyada Nuuraadiin Xaaji Mahad aad ayay u fiican tahay. Isaga oo salaaddii Makhrib ku tukanaya Masaajidka Shaafici waxaa weeraray nin Dusgiyada hoose dhexe ee Nuuraadiin Macallin ka ahi, kaasoo dhaawacyo fudud kasoo gaadhsiiyay madaxa xilli uu salaaddii Makhrib ku tukanayay, xaaladdiisa caafimaadna way fiican tahay, mana jirto wax laf ah oo jaban, Allaah mahaddii wuu talinayaa, aad ayuuna u fiican yahay.”
Previous articleFatahaadda Webiga Shabeelle oo sii korodhay
Next articleXirsi: Xukuumaddu way ku fashilantay arrinta Ceel-afweyn